Ucoceka njani matte emnyama yokuhlambela
Ikhaya / Isikhokelo se-Faucet / Ucoceka njani Ukulungiswa kweMatte eMnyama yokuGcina
2021 / 01 / 28 uhleloIsikhokelo se-Faucet 9695 0
Iindlela zokuhombisa zasekhaya ziyatshintsha kunye namaza afana neendlela zalo nakweyiphi na indawo ebomini, ukusuka kwifashoni ukuya kwizinwele. Okwangoku, kukho izinto ezithile zokuhombisa ebeziqhele ukwenzeka iminyaka kungabikho phawu lokuma. Izixhobo zokuhlambela ezimnyama ezimnyama ziphakathi kwazo.
Umnyama omnyama ngumkhwa ithandwa kakhulu kumakhaya aphesheya kwe-US nakwihlabathi liphela. Inenkangeleko ebonakalayo yanamhlanje kunye neklasi ephezulu ethandwayo ngabanini bamakhaya kude nakude. Ewe kunjalo, ijongeka intle kuphela ukuba igcinwe icocekile kwaye intsha. Ugcina njani ujongeka ixesha elide?
Ngelixa izinto ezimnyama matte zilula ukuzigcina kuninzi lwendawo ezigqityiweyo, kukho imigaqo kunye nezikhokelo ekufuneka ziqwalaselwe. Esi sikhokelo sikunika yonke into oyifunayo ukuze ugcine izinto zakho zibukeka zintsha kwaye igumbi lakho lokuhlambela likhangeleka linobunewunewu.
Kutheni kubalulekile ukucoceka izixhobo zokuhlambela ezimnyama eziMatte?
Xa kuziwa kwizinto zakho zangaphandle, ukucoca rhoqo kuya kubanceda bagcine ukubukeka kwabo okutsha kwibhokisi. Ayipheleli nje ekubeni amabala amanzi kunye neentsalela zisuse kwizinto zakho zobuhle, kodwa ezinye zezi ntsalela ziqulathe imichiza enokuthi igqitywe ekugqibeleni. Ukucoca ngokukhawuleza kuya kukunceda uthintele umonakalo wexesha elide kwizinto zakho.
Ngelixa kuyinyani ngaphandle kwempahla yakho, ukucoca izinto zakho zangaphakathi kubaluleke ngakumbi. Iipompo kunye ne-drains ngokufanayo zinokuvala, ukwenza izinto zakho ezibalulekileyo zingasebenzi kakuhle. Kwiimeko ezininzi, ishedyuli elula yokucoca inokuthintela ezo ngxaki.
Kukangaphi ukucoca iiMidlalo eziMnyama eziMnyama
Sonke sinobomi obuxakekileyo, ke kufuneka ulisebenzise kangaphi ixesha lokucoca izinto zakho? Ngethamsanqa, ukucoca izinto zabo zangaphandle kulula ukuzibandakanya kwinkqubo yakho yokucoca ngeveki, igumbi lokuhlambela ngalinye lithatha imizuzu emihlanu okanye ngaphantsi.
Ukucoca iindawo zakho zangaphakathi kulungiswa kuthatha imizuzu embalwa eyongezelelweyo, kodwa rhoqo imizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 ininzi kwigumbi lokuhlambela elineshawari kunye nesinki esinye okanye ezibini xa uqhubeka neeseshoni zokucoca rhoqo. Oku kufuneka kucocwe kube kanye ngenyanga okanye ukuze kugcinwe ulwakhiwo olungcolileyo phantsi kolawulo.
Imiceli mngeni ephezulu ekuCoceni iindawo zokuhlambela ezimnyama eziMnyama
Ukugqitywa kwe-Matte emnyama kuhlala kunokuba yomelele, ke ayisiyonto inzima ukuyicoca njengokunye ukugqitywa. Kukwakho nemiceli mngeni ekufuneka igcinwe engqondweni.
Ukugcina iMatte igqityiwe
Ezinye iimveliso zokucoca ziyilelwe ukuba zingacoci kwaye zicoceke kuphela kodwa ukongeza nokuqaqamba. Leyo inokuba yinto oyifunayo kwiitafile zakho, kodwa hayi kwindawo yakho yokuhlambela emnyama emnyama. Kuya kufuneka usebenzise iimveliso eziza kushiya ukubonakala kwe-matte kuhambelana.
Ukususa Amabala Amanzi
Isibonelelo sokulungiswa kwematte emnyama kukuba ayibonisi amabala amanzi ngokulula njengokuqaqamba okuphezulu njenge chrome okanye ubhedu olukhazimlisiweyo. Iindawo zamanzi ziyavela, nangona kunjalo, kwaye uya kufuna ukuzicoca xa zisenza.
Ezo ndawo zamanzi zihlala zinobunzima kwaye ziyaqhubeka ngakumbi kunothuli oluqhelekileyo kunye namanye amasuntswana kulungiso. Kubalulekile ukuba bacoceke ngendlela eyomeleleyo ngokwaneleyo ukuba isuse amabala amanzi kodwa ithambe ngokwaneleyo ukuthintela ukugqabhuka.
Iidosi kunye nezinto ekungafunekiyo ukuba zicocwe kulungiswe Matte Black lokuhlambela
Ukugcina iindawo zakho zokuhlambela ezimnyama matte zikhangeleka zibhetele, kukho izikhokelo ezibalulekileyo ekufuneka zilandelwe, ukusuka kwiimveliso onokuzisebenzisa ukuya kwiindlela ezithile. Landela ezi ngcebiso ukuze ufumane iindawo ezingenabala, ezingenakonakalisa.
Sebenzisa isisombululo esilula sesepha
Zininzi iikhemikhali ezinokonakalisa ukugqitywa komnyama omnyama, kubandakanya neekhemikhali ezininzi ezifumaneka kwiimveliso zokucoca ezorhwebo. Yeyiphi eyona ndlela ikhuselekileyo neyona isebenzayo yokucoca la malungiselelo? Amanzi alula anesepha.
Gcwalisa ibhakethi okanye usinki ngamanzi kwaye wongeze isepha yesitya esiqhelekileyo. Qinisekisa ukuba isepha yokulinganisa isitya se-pH ukuze ingabi ne-asidi. Yixube, udibanise ilaphu emanzini anesepha, kwaye uyisebenzise ukosula izinto zakho.
Kubalulekile ukuba uhlale uphepha ukusebenzisa ii-asidi kwimidlalo yakho emnyama emnyama. Ezi asidi zinokuphela ekugqibeleni, nokuba isixhobo sivela kumvelisi okumgangatho ophezulu. Ingashiya ngasemva iindawo ezingalinganiyo zokugqiba ezonakeleyo.
Ukwahluka kuphela kukuba ungasebenzisa iviniga xa ususa amabala amanzi anenkani. Nangona kunjalo, iviniga kufuneka ihlanjululwe kakhulu kwaye kukho iindlela zokusebenzisa ukuthintela umonakalo, esiya kuthi sime ngaphezulu.
Sebenzisa ilaphu elimnene ekucoceni
Naluphi na uhlobo lokugqiba lunokuphuhlisa imikrwelo, kwaye umbala omnyama awukho. Nokuba izixhobo zokucoca ziqhelekileyo ezinje ngeebrashi, iipads zokukrwela, kunye neziponji ezirhabaxa zinokukrwela izinto zakho. Esona sixhobo silungileyo sokusebenzisa ngelixa ucoca izinto zakho zelaphu elilula le-microfiber.
Sukusebenzisa ii-Wax okanye iiMveliso zokuCoca ngokuGcwalisa iiarhente
Le yincam abantu abaninzi abangayiqondiyo, kodwa ibalulekile ngokugqitywa kwe-matte. Abavelisi benza ukugqitywa kwe-matte ngokongeza ukubonwa kwemicroscopic kwamaqhuma, iinduli kunye neentlambo. Xa ukukhanya kubetha umphezulu, obu bunjani busasaza ukukhanya ukuze kungabikho kubonakaliswa ngokungagungqiyo njengokuba ubuya kubona kumphezulu ogudileyo.
Iwaxes, izicoci zeglasi, kunye nezinye iimveliso zineearhente zokugcwalisa. Ezi zithako zisebenza ngokugcwalisa imiqolo phezu komhlaba ukuyenza ikhanye ngakumbi. Ngelixa kufanelekile kwizipili kunye neetafile zokuphamba zegranite, iya kwenza ukungangqinelani okuchaphazelayo kumatshini omnyama we-matte- okanye nakuphi na ukugqitywa kwematte.
Hlanganisa ukulungiswa ngokukhawuleza
Xa uhlamba izinto zakho ezimnyama matte ngesepha yesitya, kubalulekile ukuba uzihlambe ngamanzi kwangoko kwaye uzomise kakuhle. Oku kukuvumela ukuba uthintele nawaphi na amabala amanzi okanye intsalela ekuhlaleni ngasemva kwaye wonakalise umsebenzi wakho wokucoca. Khumbula ukomisa izixhobo ngendwangu ethambileyo, ecocekileyo ye-microfiber kunokusebenzisa nantoni na ebukhali okanye ebunjiweyo.
Sukusebenzisa abaCoci beNjongo ngokuBanzi
Xa ubona imveliso ephawulwe njengeyona njongo yokuhlambela, ucinga, “Kulula, ndingayisebenzisa nakweyiphi na into esendlini yokuhlambela. Kuyavela ukuba "nantoni na" yinto egqithisileyo.
Ezi mveliso zihlala ziqulathe iiacidi, iiarhente zokugcwalisa, okanye zombini. Ngelixa ezi zithako zilungile kwiindawo ezininzi, zinokonakalisa ukugqitywa komnyama omnyama, ngakumbi emva kokusetyenziswa okuphindaphindiweyo kweveki.
Ekugqibeleni, ngaphandle kokuba uyazi zonke izithako ezicocekileyo kwaye uqinisekile ukuba akukho nanye kuzo ebeka umngcipheko, kungcono ukuba ucace. Isepha yesitya yenza umsebenzi wokucoca izinto zakho ukuze kungabikho sicoceko siqatha. Ukuba usebenzisa imveliso yokucoca, nangona kunjalo, qiniseka ukuyihlamba ngokukhawuleza kwaye uyomise ukulungiswa kwamanzi ngokukhawuleza, njengokuba kuyisincomo sokusebenzisa isepha yesitya.
Coca umphandle wangaphandle ngaphambi kobuso bangaphakathi
Xa abantu becinga ngokucoca iindawo zabo zokuhlambela, bacinga ngemiphezulu yangaphandle kuqala. Indawo yangaphakathi ifuna ingqwalaselo nayo, nangona kunjalo, ukuba ufuna ukugcina izixhobo zakho zikwimeko entle kwaye ziqhuba ngokufanelekileyo.
Kubalulekile ukuba ucoce umphandle nomphandle kunye nelaphu elifanayo, nangona kunjalo, coca indawo yangaphandle kuqala. Iindawo ezingaphakathi zixhaphake ngakumbi ekwakheni i-calcium kunye neekalika, ukungcola kunye namanye amasuntswana. Ukuba uwaphatha la masuntswana uye kumphezulu ongaphandle wezinto zakho, banokukrwela okanye bashiye intsalela ekugqibeleni.
Sukuhamba ngaphezulu usebenzisa iVinegar
Njengoko besesitshilo ngasentla, iviniga yiyo kuphela iasidi ekufuneka uyisebenzisile xa ugqibe umnyama omnyama, kwaye kuphela phantsi kweemeko ezithile. Isebenza kakuhle ekususeni amabala amanzi anenkani kodwa qiniseka ukuba uyayilandela le nkqubo ngocoselelo.
Okokuqala, cola iviniga. Isisombululo se-50% seviniga kunye ne-50% yamanzi sisebenza ngokufanelekileyo ngokwaneleyo ukuba sisebenze kodwa sithambe ngokwaneleyo ukunqanda umonakalo. Dipha ilaphu le-microfiber ethambileyo kwesi sisombululo kwaye uyisebenzise ukosula ngobunono amabala amanzi.
Ngokukhawuleza xa ugqibile uhlambulule ukulungiswa kwamanzi ukuze ususe nayiphi na intsalela yeviniga. Okokugqibela, yome ngelaphu le-microfiber ecocekileyo.
Uyifunde Imiyalelo yoMvelisi wakho
Xa ungathandabuzeki malunga nokukhathalela indawo yakho yokuhlambela, soloko ujika kwimiyalelo yomenzi. Uninzi lweencwadana zemiyalelo ziyafumaneka kwi-Intanethi ukuba awuyigcinanga ikopi yakho yoqobo.
Abavelisi abahlukeneyo ngamanye amaxesha basebenzisa izixhobo ezahlukeneyo kunye nobuchule bokwenza i-matte emnyama yabo igqityiwe. Ngenxa yeso sizathu, bazi kakuhle ukuba zeziphi iintlobo zeemveliso kunye nobuchule obuya kucoca indawo yazo ngokufanelekileyo ngaphandle kokubeka emngciphekweni umonakalo.
Izinto ezininzi zokuhlambela ziza kunye nolunye uhlobo lwewaranti yomenzi, kwaye kwezinye iimeko, ukuphambuka kwimiyalelo yokhathalelo lomenzi kuya kuyiphelisa iwaranti yakho. Kuhlala kungcono ukuba ukhuseleke kunokuba uzisole.
Ukucoca iiNxalenye zangaphakathi zeZinto zakho zeGumbi lokuhlambela
Njengoko besesitshilo, kubalulekile ukugcina izinto zangaphandle zokuhlambela zikhangeleka zintle, kodwa kuya kufuneka ucoca ngaphakathi nangamaxesha. Oko kuya nakweyiphi na indawo enamalungu angaphakathi, njengamanzi kunye neepompo ezinee-aerator.
Ukucoca iAerator yakho yethumbu
I-aerator sisiqwengana esincinci ngaphakathi kwetephu yakho ekhangeleka njengescreen esihle. Icoca amanye amasuntswana emanzini akho ngelixa yongeza umoya kumjelo wamanzi ke ngumjelo ogudileyo. Njengoko iluncedo njenge-aerator, inokukhulisa ukwakheka kwamasuntswana ngenxa yoko ifuna ukucocwa amaxesha ngamaxesha ukuze ingathinteli amanzi ukuba angene.
Kwiimpompo ezininzi, i-aerator ingaphakathi kwesikrufu esincinci ngaphakathi kwetephu yakho, ihlala isezantsi kwetepisi. Ngokwesiqhelo ungayisusa le cap ukuze uyisuse, nangona kungcono ujonge imiyalelo yomenzi wakho ukuze uqiniseke.
2. Yenza isicombululo sakho sokuCoca
Sebenzisa uhlobo olufanayo lokucoca isisombululo osisebenzisela izinto zangaphandle ezimnyama: isepha yesitya kunye namanzi. Yidibanise kwisinki sakho okanye kwibhakethi kwaye uya kuba ukulungele ukuya.
Sebenzisa ilaphu, ibrashi yokuhlikihla, isiponji, okanye ibrashi yamazinyo endala, khuhla i-aerator emanzini anesepha ukukhulula ukungcola kunye nokwakha. Yipule rhoqo, ususe amasuntswana akhululekileyo. Uvavanyo olubonakalayo olulula luya kukuxelela xa i-aerator icocekile.
Ungasebenzisa eli thuba ukuhlaziya kwakhona ngaphakathi kwetephu yakho kuba i-aerator ihlala iyithintela. Thatha ibrashi yamazinyo endala kunye nesepha yesitya kunye namanzi ukhuhle ngaphakathi kwetephu. Kufuneka uhambe ngeesentimitha ezimbalwa ukwenza umsebenzi ogqibeleleyo.
4. Faka endaweni yeAerator
Beka iziqwenga ze-aerator kwakhona ngokudibanisa ngendlela ezazikuyo xa wawuzisusa. Zive ukhululekile ukujonga imiyalelo yomenzi ukuba awuqinisekanga. Mane ujije le ndawo iqokelelweyo ibuyile endaweni kwaye ugqibile.
Ukucoca imijelo yakho yangasese
Iidreyini zokuntywila kunye neeshawari zokuhambisa amanzi zombini ziyinxalenye ebalulekileyo yendawo yakho yokuhlambela, kwaye bafuna ukucocwa ngaphakathi ngaphakathi rhoqo. Ngamanye amaxesha idreyini ikuxelela ukuba lixesha ngokukhupha amanzi kancinci okanye ukuphuhlisa ivumba elibi. Nokuba awuziboni ezi mpawu, kuyanceda ukucoca amadreyini akho rhoqo ngenyanga okanye ukuze uhlale ngaphezulu kweebhloko.
1. Susa uMsele
Kwimeko yeesinki zokuntywila, ungahlala ukhulule isikhungo sedreyini ngokulula ngesandla. Kwimeko yeminye idreyini yeshawari, kunokubakho izikrufu ezincinci ekufuneka uzisusile nge-screwdriver esilula.
2. Susa naziphi na iiClogs zangaphakathi
Unokuthatha isixhobo sokususa iicook kuyo nayiphi na ivenkile yehardware. Yinduku ende, ebhityileyo, eguqukayo, edla ngokwenziwa ngeplastikhi, enamagwegwe ecaleni kwemiphetho yokubamba iinwele kunye nokunye ukungcola okuxineneyo. Silayida nje esi sixhobo kumsele uze uyitsale ukuze ususe naziphi na iibhlogi ngaphakathi kweenyawo zokuqala zedreyini.
3. Coca ujikeleze kwaye ngaphakathi kuDreyini
Ngazo naziphi na iibhlokhi ezimdaka ezihambileyo, sebenzisa ilaphu lakho le-microfiber kunye namanzi anesepha ukucoca macala onke edreyini nangaphakathi komphezulu womsele. Ungalibali ukucoca isiqwenga sokukhupha amanzi owawususa ekuqaleni.
4. Hlanganisa kwakhona uMsele
Xa idreyini icocekile kwaye intsha, lixesha lokuba uyiphinde uyibuyisele endaweni kwaye ukonwabele ukukhupha idreyini yakho entsha engena-clog-free.
Ukunyamekela izixhobo zakho zokuhlambela ezimnyama
Izixhobo ezimnyama zokuhlambela ezimnyama ngokwenyani zinenkangeleko yokunethezeka nokucokiswa. Okwangoku, kwanezona zinto zintle zinokubonakala zingahlambulukanga ukuba awuyigcini icocekile kwaye uyikhathalela ngokufanelekileyo. Landela esi sikhokelo ukugcina izinto zakho ezimnyama matte zikhangeleka zibalaseleyo kwaye zenza umbono omkhulu kuye wonke umntu kwiminyaka ezayo. Ukuba usathenga iindawo ezifanelekileyo, jonga indawo yethu yokuthenga izixhobo zokuthenga.
Iimveliso zeMatriki zeGumbi lokuhlambela eziMnyama eziCetyiswayo
Centerset Igumbi lokuhlambela iBhobho yokuhluza kunye neNdibano yokuHamba Matte eMnyama
Matte Black lokuhlambela kumbhobho wedolophu 4 intshi iZiko
Matte Black-Handle ezimbini-ngokubanzi Igumbi lokuhlambela
Igumbi lokuhlambela eliseBlack Faucet Matte emnyama
Ibhafu emnyama yegumbi lokuhlambela elinokuHamba okuPhezulu okujikelezayo
Ngaphambili :: Sesiphi esona sigqibelo sithandwa kakhulu kwiipompo zegumbi lokuhlambela? next: Ungayikhetha njani itompu yangasese: 2021 Isikhokelo sokuthenga
2021 / 01 / 27 6201